Torapasika Mahajanga Taovam-biby fa tsy an’olombelona ilay hita
“Voamarina fa taovam-biby fa tsy an’olombelona ilay hita tany amin’ny torapasik’i Mahajanga, hoy
Vono olona in-telo nisesy tao Antsohihy “Efa tao am-ponja vao navoakan’ny olona ilay jiolahy”
Diso ny filazana teo amin’ny tambajotran-tserasera fa teo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana no azon’ireo mpamaly faty ny lehilahy iray nandratra ka nahatafy ny naman’izy ireo.
mindrana mpandeha amin’ny seza aoriana rehefa mitaky saran-dalana izy ireo. Misy kosa anefa ny tsy mety mivoha ka ny mpamily mpanampy no midina avy ao anaty varavaram-pitaratra na miantso
ny mpamily ary misy aza ireo mpandeha an-tongotra no indramina. Midika izany fa raha tojo ny patsa iray tsy omby vava, indrindra raha firehetana dia kitoza avokoa ny mpandeha. Maro amin’ireo taksibe
ireo no lazain’ny namany ihany fa vatam-paty vy mandehandeha. Ny loto sy ny voronkitsain’nyfipetrahana ary ny fandihizan’ny seza efa tsy lazaina intsony. Mifanilika ny mpamily sy tompona fiara sendra ny mpanao gazetinay. “Mandray “versement” fotsiny fa tsy manamboatra fiara, mpanankarena mahihitra ny lehibenay. Isaky ny tenenina mba hanamboatra fiara dia tezitra foana”, hoy ny mpamily fiara iray. Nilaza kosa anefa ny tompona fiara iray fa : “Latsaka noho ny an’ny rehetra ny anay ny vola alaina amin’ny mpamily sy mpanampy azy isan’andro fa raha misy fahasimbana ny fiara dia izy ireo no manamboatra mba hitandreman’izy ireny”, hoy i Aimé Bienvenue, tompona fiara. Ny motera sy ny vatan’ny fiara no lazain’ity farany fa isaky ny taona vitsy ihany no iandraiketany.